DUNIDA maanta waa dhibaato miiran. Dad tiro badan waxaa qabsaday dagaallo, masiibooyin, jirrooyin, faqrinimo, daacaddarro iyo mushkilado kale oo badan. Malaha adiga xitaa maalinba maalinta ka dambeysa welwel baa la kulantaa. Yaa ina caawin kara? Ma jiraa qof ina daneeya?
Ilaahay jacaylkiisu wuxuu ka sii weyn yahay jacaylka hooyo ay cunuggeeda u qabto
Waynu hubnaa inuu Ilaahay ina daneeyo. Eraygiisa Quduuska ah wuxuu yiri: ‘Miyay naag ilmeheeda nuuga illoobi kartaa inay wiilkii uurkeeda ka soo goʼay u naxariisan? Malaha kuwaasu way illoobi karaan, aniguse weligay ku illoobi maayo.’ *
Miyayna qalbi qaboojis ahayn ogaanshada danayska Ilaahay? Ilaahay jacaylkiisa wuxuu ka sii weyn yahay dareenka ugu sarreeya oo binuʼaadanka helaan oo ah jacaylka hooyo ay u leedahay cunuggeeda. Ilaahay weligiis ina ma dayrin doono! Si weyn buu Ilaahay inoo caawiyay. Sidee? Wuxuu ina tusay inaan nolol farxad leh heli karno haddii aan iimaan run ah yeelanno.
Iimaan daacad ah haddii ad leedahay farxad buu kuu keenayaa. Iimaanku wuxuu kaa dhawri doonaa dhibaatooyin badan. Iimaankaas ayaa ku siin doona dulqaadasho dhibaatooyinka aanad ka leexan karin ugu adkaysatid. Iimaankaas Ilaahay buu kuu dhoweyn doonaa oo qalbi qabow iyo degganaansho buu ku siin doonaa. Iimaanka runta ah wuu ku hoggaamin doonaa sidaad mustaqbal wanaagsan u heshid oo Jannada weligaa ugu noolaatid.
Haddaba iimaan run ah muxuu yahay? Oo sidee baad u heli kartaa?
^ qayb. 4 Fiiri Ishacyaah 49:15 oo ku qoran Qorniinka Quduuska ah.
Ma Ilaahay Baa Siliceenna Masʼuul Ka Ah?
Silicu gebigeen buu ku dhici karaa, xitaa kuwa Ilaahay raalli ka yahay. Waayo?
Wadaag Wadaag Ilaahay Miyuu Ina Daneeyaa?